Muuri News Network » Dhageyso: Migration Swedan oo arin argagax le ku soo rogtay Qaxotiga..
Dhageyso: Migration Swedan oo arin argagax le ku soo rogtay Qaxotiga..
May 11, 2016 - Comments off
Migrationverket oo sheegay in ay adeegsanyaan bolis si qaxaqootiga sharciyada loo diiday xeryaha looga saaro. Foto: Björn Olsson/TT, Simon Rissvik/SR
– Waxay u muuqataa in Migrationsverket uwado dirtay warqad isku mid ah dhamaan dadka laga gaaray go’aan dal ka masaafurin ah, xataa haddii aysan suurtogal aheyn in dalka laga saaro, waxaad moodaa in hey’adda kalo jecleyn. Dad aad u faro badan ayaa na soo wacayo o ona weydiinaya, maxaa hadda dhaci doona, ma banaanka ayaa lay tuuri doonaa, ayuu yeri xeer yaqaan Anders Sundqvist.
– Waxaa anniga ila fiicnaan laheyd in hey’adda ay sidaan ka taxar badan tahay oo ay fiiriyaan qofka ay warqad u dirayaan. Waxay aheyd in ay kiis kasta goonidiisa u eegaan oo isweydiiyaan qof ma yahay qof xaaladiisa wax ka baddeli kara, waxaan gaarnay go’aan dal ka masaafurin balse suurtogal matahay in la meelmariyo, iyadoon loo eegneynin in qofka doonayo in uu iskiis u baxo iyo in kale, marka ma ahan in loo soo diro warqadan, ayuu yeri Anders Sundqvist oo ka socda ururka Rådgivningsbyrå för asylsökande och flyktingar.